RASMI: Virgil van Dijk oo xaqiijiyey inuusan ciyaari doonin tartanka qarammada Yurub – Gool FM
(Liverpool) 12 Maajo 2021. Virgil van Dijk ayaa xaqiijiyey inuu qaatay go’aanka ah inuusan u ciyaarin xulkiisa qaranka Holland tartanka EURO xagaagan.
Daafacan reer Dutch ayaa garoomada ka maqnaa tan iyo bishii October markaasoo uu taakal adag kala kulmay Goolhayaha Everton ee Jordan Pickford, taasoo sababtay in dhaawac jilibka ah uu soo gaaray isla markaana uu ku qasbanaaday in qalliin lagu sameeyo.
Van Dijk soo kabashadiisa ayaa weli socota, muuqaal uu soo dhigay baraha bulshada ayaana muujinayey isagoo tababar ku qaadanaya xerada tababarka kooxda dhammaadka bishii April.
Si kastaha ha noqotee, waxa uu aaminsan yahay seegitaanka EURO inuu yahay go’aan sax ah, waxaana taas beddelkeeda uu diiradda saarayaa inuu dhammaystiro soo kabashadiisa isla markaa uu diyaar u noqdo kulammada is-diyaarinta xilli ciyaareedka.
Isagoo la hadlayey Website-ka rasmiga ah ee Kooxda Liverpool, Van Dijk ayaa yiri: “Iyadoo wax walba ay socdaa, waxaan dareemayaa jir ahaan inay saxan tahay inaan go’aansado inaanan ka qeyb galin EURO, isagoo kale aan aado wajigeyga ugu dambeeyey ee soo kabashadeyda inta lagu jiro fasaxa xilli ciyaareedka.
“Sidaas darteed, waxaan si buuxda diiradda u saari doonaa kulammada is-diyaarinta xilli ciyaareedka kooxda, waana hadaf dhab ah, sidaa awgeed waxaan eegayaa inaan hore u socdo.
“Sida iska cad, waxaan aad uga niyad-jabsanahay inaan seego EURO, inaan seego koobka qarammada Yurub iyo inaan dalkeyga hoggaamin waayo, laakiin arrimuhu sidii ay ahaayeen ayay ahayd oo waa inaan aqbalaa – dhammaanteenna waa inaan aqbalnaa.”
Ugu dambeyntii waxa uu sheegay Van Dijk inuu filayo in go’aankan uu yahay go’aanka saxda ah ee uu kaga haray xulkiisa si uu si buuxda ugu soo kabsado.
29-sano jirkaan ayaa Kabtan u ah xulka qaranka Holland, laakiin Tababare Jurgen Klopp ayaa dhowaan sheegay inay aad halis u noqonayso in Holland ay xiddigan u ka xaysato tartanka EURO 2020, kaasoo billaabanaya 11-ka bisha June.